Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Ikota yeQatar yeeNdawo zoMoya kwikota yeAirbus yayo yeA350 Fleet
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
I-Qatar Airways Ground ngekota yeAirbus yayo A350 Fleet
I-Qatar Airways ilindele ukuba i-Airbus iseke unobangela kwaye iyilungise ngokusisigxina imeko eyoneleyo yeQatar Airways kunye nomlawuli wethu ngaphambi kokuba sithathe naziphi na iinqwelomoya ze-A350.
Ukhuseleko kunye nokukhwela kwabahambi bayo kuhlala ingoyena mcimbi uphambili weQatar Airways.
I-Qatar Airways iyasebenzisana nazo zonke iinkampani zokuqeshisa ezichaphazelekayo yile A350 yomhlaba.
I-Qatar Airways sele ithathe inyathelo lokubuyisela iinqwelo zayo ze-A330 kwinkonzo.
Ukongeza kokuhlolwa kwayo rhoqo ukuqinisekisa ukhuseleko oluqhubekayo kunye nokukhuseleka kwabo bakhweleyo kunye neenqwelo moya, Qatar Airways iyaqhubeka nokubeka iliso ngokusondeleyo imeko ebalulekileyo kuyo Airbus Iinqwelo ze-A350 apho umhlaba we-fuselage ongaphantsi kwepeyinti uthoba isantya esikhawulezileyo. I-airline isebenza nomlawuli wayo ukuqinisekisa ukhuseleko oluqhubekayo lwabo bonke abakhweli kwaye kwesi siseko, kwaye ngokulandela imiyalelo ebhaliweyo ecacileyo yomlawuli wayo, iinqwelomoya ezilishumi elinesithathu ngoku zibekiwe, zizisusa ngokufanelekileyo kwinkonzo de kube lixesha elingunobangela ukusekwa kunye nesisombululo esonelisayo esenziwe safumaneka ukulungisa ngokusisigxina imeko engaphantsi.
Ukhuseleko kunye nokukhuseleka kwabo bakhweleyo kuhlala ingoyena mcimbi uphambili weQatar Airways. Inkampani yezindiza iya kwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba abakhweli bayo abaphazanyiswa kukususwa okugunyazisiweyo kwezi nqwelomoya kwinkonzo kwaye bazakuzama ukufumana ezinye izisombululo zokubonelela ngomgangatho oqhelekileyo wenkonzo kubo bonke abakhweli. I-Qatar Airways sele ithathe inyathelo lokubuyisa iinqwelo zayo ze-A330 ukuba zisebenze kwangoko ukulungisa ezinye zeempembelelo zenqwelomoya yeA350 kwaye ngoku ijonge ezinye izisombululo.
Ukongeza kugqaliso lwenqwelomoya ekukhuseleni igama layo lokubonelela awona manqanaba aphezulu kumava abathengi, iQatar Airways iyasebenzisana nazo zonke iinkampani eziqeshisayo ezichaphazeleke kule A350 isiseko esele iqale ukuhlola inqwelo moya yazo.
UMlawuli oyiNtloko weQatar Airways Group, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: "Ngolu phuhliso lutsha, silindele ngokunyanisekileyo ukuba i-Airbus iwuphethe lo mba ngononophelo olufanelekileyo. I-Qatar Airways ayiyi kwamkela enye into ngaphandle kweenqwelomoya eziqhubeka nokunikezela abathengi bayo owona mgangatho uphezulu wokhuselo kunye namava okuhamba afanelekileyo. I-Qatar Airways ilindele ukuba iAirbus iseke unobangela kwaye ilungise ngokusisigxina imeko eyanelisa iQatar Airways kunye nomlawuli wethu phambi kokuba sithathe nayiphi na inqwelo moya eyiA350. ”